छोटकरीमा : आज - २०७७ असोज २९, बिहीबार
आज देशभर कोरोना नियन्त्रणको लागि के-कस्ता माग एवं निर्णयहरू भए ? कोरोना भाइरसको पछिल्लो वस्तुस्थिति थाहा पाउनुहोस्। मुलुक एवं मुलुकबाहिर के-कस्ता राजनीतिक, आर्थिक, न्यायीक एवं शैक्षिक गतिविधिहरू भए ? एकसाथ एकैठाउँमा सम्पूर्ण खबरहरू पढ्नुहोस्।
बिहीबार ३,७४९ जना थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या १,२१,७४५ पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ६९४ पुगेको छ। हालसम्म नेपालमा ८४,५१८ जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्।
=> PCR Tests Today: १६,५९८ => Recovered Today: ३,५६४
उपत्यकामा थप १९ सय ३५ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । १६ हजार ५ सय ९८ पीसीआर परीक्षण भएकोमा काठमाडौंमा १६ सय ९३, भक्तपुरमा १ सय ३४ र ललितपुरमा १ सय ८ गरी १९ सय ३५ जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
उपत्यकामा थपिए १९ सय ३५ जना संक्रमित
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दुई सय ८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक गरेको छ । २० वर्षको अवधिमा आयोगमा १२ हजार आठ सय २५ उजुरी परेको र त्यसमध्ये ६ हजार ६ सय १८ आयोगले फर्स्याेट गरेको छ ।
मानवअधिकार आयोगद्वारा दुई सय ८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची सार्वजनिक
पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा प्रहरी र हतियारधारी समूहबीच बुधबार राति झडप भएको छ । जंगलछेउको ओरिया खोलामा लागुऔषध तस्कर र प्रहरीबीच झडप भएको हो ।
तस्कर समूहले एक राउन्ड फायर गरेपछि प्रहरीले पनि दुई राउन्ड हवाई फायर गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अशोक साहले जानकारी दिए ।
प्रहरी र हतियारधारी समूहबीच ठाेरीमा झडप, चार पक्राउ
छिमेकी देश चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको दोलखाको लामाबगरमा सशस्त्र प्रहरीले बिओपी स्थापना गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बुधबार सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी मन्दीप श्रेष्ठले उद्घाटन गर्दै बिओपी स्थापना भएको घोषणा गरेका हुन् ।
दोलखाको लामाबगरमा सशस्त्रको ‘बिओपी’ स्थापना
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको उपकुलपति कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरिएको छ । उपकुलपति डा. राजेन्द्रराज वाग्लेले अनियमित तवरले डिन नियुक्ति गरेको भन्दै कर्मचारी कल्याणकारी समाजले अस्पताल प्रशासनमा ताला लगाएको हो ।
उपकुलपतिको कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी
पोखरा महानगरपालिकाले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको छ ।
कार्यालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको मेयर मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
पोखरा महानगरपालिकाका अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द
ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाईंलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
प्रजिअलाई कोरोना पजिटिभ भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सात दिनलाई सिल गरिएको छ ।
ताप्लेजुङका प्रजिअ चापागाईंलाई कोरोना संक्रमण
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयलाई लिएर गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टमाथि कुटपिट भएको छ । आन्दोलनरत पक्षले लगाएको ताला खोल्न जाँदा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टमाथि ढुंगा प्रहार भएको र टाउकोमा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
केन्द्रबारे विवाद हुँदा गाउँपालिका अध्यक्षमाथि कुटपिट, पाँच प्रहरीसहित १४ घाइते
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा नबसे संक्रामक रोग ऐनअनुसार ६ महिना जेल सजाय हुने चेतावनी दिएको छ । तर, पोखरामा संक्रमित नै फेला नपर्ने समस्या देखिएको छ । पोखरा महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार पछिल्ला हप्ता सातजना संक्रमित फेला परेका छैनन् । उनीहरूलाई खोजिएको भए पनि स्वाब परीक्षण गराउँदा नक्कली परिचय र नक्कली नम्बर टिपाएकाले समस्या आएको हो ।
नक्कली परिचय दिँदा कोरोना संक्रमित पहिचानमा समस्या
वीरेन्द्रनगरका किशोरी तथा बालिकाहरुले बलात्कारीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढ्दै गएको र दोषीलाई कारबाही नभएको भन्दै उनीहरुले बिहीबार र्‍यालीसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
बलात्कारीलाई कारबाही माग गर्दै वीरेन्द्रनगरमा किशोरीहरुको प्रदर्शन
सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार आफ्नै खर्चबाट गर्न भनेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै जसले इन्स्योरेन्स गरेको छ उसले सोही रकमबाट र नगरेको भए खल्तीबाटै खर्च गरेर कोरोनाको उपचार गर्नुपर्ने बताए ।
कोरोनाको उपचार आफ्नै गोजीबाट गर्नू, सरकारले सक्दैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छन् । सरकारले बुधबार मात्र आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी नयाँ तीन अनुहारलाई समावेश गरेको थियो ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले गरे शपथग्रहण
सुर्नया गाउँपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष केशव मडैको निधन भएको छ । उनको बिहीबार ७० वर्षका उमेरमा निधन भएको प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । वडाध्यक्ष मडै लामो समयदेखि मधुमेह, उच्च रक्तचाप र कमलपित्तको बिरामी रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लीला विष्टले जानकारी दिए ।
वडाध्यक्ष मडैको निधन
काठमाडौंको सोह्रखुट्टेस्थित फलफूल चोकमा रहेको एउटा घरमा बिहीबार दिउँसो एलपीजी ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा ११ जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको मनमोहन र पिपल्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
सोह्रखुट्टेमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट : ११ जना घाइते [अपडेट]
बहराइनका राजकुमार मोहमद हमद मोहम्मद अल खलिफासहितको टोलीले गोरखाको मनास्लु हिमाल आरोहण गरेको छ । बिहीबार बिहान ६ बजेर १० मिनेटमा मनास्लु हिमाल आरोहण सम्पन्न गरेको सेभेन समिट ट्रेक प्रालिका प्रबन्धक निर्देशन पासाङ फुर्बा शेर्पाले बताए ।
मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि आएका बहराइनका राजकुमार शेख मोहम्मद हमाद मोहम्मद अल खलिफालाई चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँवासीले गत मंगलबार भव्य स्वागत गरे । स्थानीय पोसाक लगाइदिए । परम्परागत नृत्य देखाए । त्यति मात्रै होइन स्थानीय एक डाडाँको नाम नै बहराइनको राजपरिवारको नामबाटै नामकरण गरिदिए ।
बहराइनका राजकुमारसहितको टोलीद्वारा मनास्लु हिमालको सफल आरोहण
हुसुरडाँडा बन्यो बहराइन पिक
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । उनले ट्विट गरेर आफूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए पनि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले केही दिन यता आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई सुरक्षित र सतर्क रहन आग्रह गरेका छन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष थापालाई कोरोना संक्रमण
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर गुरुङलाई कोरोना संक्रमण भएको छ ।
उनले आज फेसबुकमार्फत आफूलाई कोरोना संक्रमण देखिएको जनाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर गुरुङलाई कोरोना संक्रमण
पाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिनका लागि दबाब बढाउन आह्‍वान गरेका छन् ।
उनले ट्‌विटरमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे पार्टीको धारणायुक्त पुरानो भिडियो पोस्ट गरेर भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन र कारबाहीका लागि दबाब बढाउन आह्‍वान गरेका हुन् ।
भ्रष्टाचार घटनाको छानबिनका लागि दबाब बढाउन आह्‍वान
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनले ०७७ कात्तिक ७ गतेबाट क्लिनफिड लागू गर्नुपर्ने बताएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै क्लिनफिडबारे सजग गराएको हो । कात्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अघि बढिनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालय भन्छ– कात्तिक ७ बाटै क्लिनफिड लागू गर्नुस्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद सानु शिवा पहाडीको निधन भएको छ । उनकाे बुधबार बिहान साढे १० बजे निधन भएकाे हाे ।
उनी नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य याने कि सांसद थिइन् । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद पहाडीको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द रहेका सबै देवीदेवताका शक्तिपीठहरू कात्तिक १ गतेदेखि खुल्ने भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका गुह्येश्वरी, भद्रकाली, दक्षिणकाली, शोभाभगवती, बंगलामुखी, मैतिदेवी, भाटभटेनी आकाशेदेवीलगायतका शक्तिपीठहरू कात्तिक १ गतेदेखि खुल्ने भएका हुन् ।
बन्द रहेका शक्तिपीठहरू कात्तिक १ देखि खुल्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पछिल्लो राजनीतिक विवादबाट मुक्त भएको बताएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएको स्रोतले जानकारी दियो । एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बाहिरका राजनीतिक विवादबाट मन्त्रिपरिषद् मुक्त रहेको बताएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक विवादबाट मुक्त छ : प्रधानमन्त्री
चीन सरकारले किङदाओ सहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि दुई उच्च अधिकारीहरुलाई पदमुक्त गरेको छ ।
किङ्दाओ सहरमा एक अस्पतालबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएपछि सहरको स्वास्थ्य आयोगमा प्रमुखलाई पदमुक्त गरिएका हुन् ।
कोरोना संक्रमण बढेपछि चीन सरकारद्वारा दुई उच्च अधिकारीलाई पदमुक्त
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि बेलायतमा फेरि प्रतिबन्धहरु कडा पारिने भएका छन् । बीबीसीका अनुसार लन्डनमा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस प्रतिबन्धहरु जारी गरिने भएको हो ।
लन्डनका लाखौं नागरिकहरुले शुक्रबार मध्यराति देखि कडा प्रतिबन्धहरुको सामना गर्नुपर्ने एकजना सांसदले बताएका छन् ।
कोरोना संक्रमण बढेपछि बेलायतमा फेरि कडा प्रतिबन्धहरु
फ्रान्स प्रहरीले स्वास्थ्यमन्त्री ओलिभियर भेरानको घरको खोजी गरिरहेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको कामबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले स्वास्थ्यमन्त्रीको घर खोजिरहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेका धेरै वर्तमान र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरुमध्ये एक हुन् । उक्त अनुसन्धानमा फ्रान्सका पूर्वप्रधानमन्त्री एडवार्ड फिलिप पनि रहेका छन् ।
फ्रान्सका स्वास्थ्यमन्त्रीको घर खोज्दै प्रहरी
चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र अब अति गरिबीबाट मुक्त भएको छ । तिब्बतमा कूल ७४ वटा अति गरिबीग्रस्त जिल्लाहरू रहेकोमा अब ती स्तरोन्नति भएका बिहीबार त्यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ ।
तिब्बत पनि ‘अति गरिबी’ बाट मुक्त
अफगानिस्तानको हेलमन्द प्रान्तमा सरकारी सैन्यबल र तालिवान विद्रोहीबीच तीन दिनयता जारी भीषण लडाइँका कारण कम्तीमा ३५ हजार स्थानीय विस्थापित भएका छन् । गत महिना अफगान सरकार र तालिवानबीच सुरु भएको शान्ति वार्तापछि दुवै पक्षबीच पहिलो पटक भीषण लडाइँ भएको हो । दुवै पक्षबीच कतारको राजधानी दोहामा वार्ता जारी छ ।
शान्तिवार्ताबीच अफगानिस्तानमा भीषण लडाइँ
थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तथा नयाँ संविधानको माग गर्दै बुधबार दसौं हजारले प्रदर्शन गरेका छन् । राजधानी बैंककमा भेला भएका प्रदर्शनकारीले राजाको अधिकार कटौतीको मागसमेत जोडदार रूपमा उठाएका छन् ।
राजधानी बैंककमा नै राजाविरोधी नारा लागेपछि सरकारले देशभर संकटकाल घोषणा गरेको छ।
थाइल्यान्डमा संकटकाल घोषणा, केही प्रभावशाली नेता पक्राउ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छोरा ब्यारोन ट्रम्पलाई पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पले ह्वाइटहाउसको वेबसाइटमार्फत छोरा ब्यारोनलाई कोभिड– १९ संक्रमण देखिएको बताएकी हुन् ।
ट्रम्पका छोरा ब्यारोनलाई पनि कोरोना संक्रमण